KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Kooxaha Fc banaadir iyo Muqdisho City oo ku guuleystey horyaaladii 2-3aad ee dalka‏
Thursday 13 December 2012 07:21
Kooxaha Fc banaadir iyo Muqdisho City oo ku guuleystey horyaaladii 2-3aad ee dalka‏
Muqdisho (KON) Kooxaha kubadda cagta ee Muqdisho City iyo Fc banaadir ayaa ku kala guuleystey horyaaladii heerarka 2-3aad ee dalka Soomaaliya.
Kooxda Fc banaadir oo ka ciyaareysay horyaalka heerka 3aad ee dalka ayaa keensatay 35 dhibcood, waxayana dhibcahaasi u sahleen in ay ku guuleesato horyaalka Soomaaliya heerkiisa sadaxaad.
Dhinaca kale horyaalka heerka 2=aad ee B ayaa waxaa ku guuleysatey kooxda Muqdisho City markii ay urursatey 29 dhibic labadii weji ee horyaalka.
Kooxaha Fc Banaadir iyo DGB ayaa u soo gudbey heerka horyaalka kooxaha heerka 2-aad ee B, dhinaca kale kooxaha Muqdisho City iyo Savaana ayaa soo tiigsadey heerka 1-aad ee A, iyadoo halkaasi ay ka laabteen kooxihii Bad Baado iyo Saxafi oo heerka B u dhashey.
Ciyaaraha Heerka koowaad ee Soomaaliya ayaa horay waxaa ugu guuleestay kooxda Elman oo ka mid ah kooxaha ugu horeeya wadanka, taasi oo dhibco badan aruursatay.
Horyaalka Soomaaliya sadaxdiisa Heer ayaa si Habsami leh wuxuu kaga socday garoonka Jaamacadaha ee magaalada Muqdisho, waxaana horyaalkaan uu ahaa mid xiiso badan oo galab walba ay u daawasho tagi jireen dadweyne badan.